पाठ लिंक विज्ञापन Dethrones गुगल Adsense (मेरो ब्लगमा) | Martech Zone
पाठ लिंक विज्ञापन Dethrones गुगल Adsense (मेरो ब्लगमा)
मंगलवार, जुलाई 3, 2007 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
Google Adsense स्थापनाको समयदेखि नै मेरो ब्लगमा विज्ञापन राजस्वको प्राथमिक माध्यम हुँदै आएको छ। म संग पनि छ आयोग जंक्शन मेरो आरएसएस फिडमा विज्ञापन, कोन्टेरा मेरो पोष्टहरूमा प्रासंगिक विज्ञापन, र पाठ लिंक विज्ञापन। म मार्फत समीक्षा पनि गर्दछु मलाई समीक्षा गर्नुहोस् र कहिले काँही प्राप्त गर्नुहोस् Starbucks पेपैल मार्फत दान। Whew!
राम्रो महिनामा, म pull 300 टाढा तान्न सक्छु $ १०k + कि जोन चाउ तल तान्छ, तर अझै मेरो विचारमा सम्मानजनक छ। तपाईले देख्नुहुनेछ कि मेरो घर पृष्ठ लगभग सबै विज्ञापनबाट सफा छ। मँ सबैतिर विज्ञापनहरू राख्न सक्दछु, तर म आगन्तुकहरूमा विज्ञापनहरू धकेल्न चाहन्नँ जुन मेरो साइटमा फर्कन्छ। बरु, म व्यक्तिहरूका लागि विज्ञापन प्रयोग गर्छु जुन मलाई अप्रत्यक्ष रूपमा फेला पर्दछ, खोज र सन्दर्भहरूको माध्यमबाट।
गुगल ऐडसेन्स, मेरो राजस्वको सबैभन्दा ठूलो स्रोत थियो… अहिले सम्म। पाठ लिंक विज्ञापन यद्यपि आधिकारिक ढंगले मेरो गुगल एड्सेन्स आय लाई ध्वस्त पारेको छ। मेमा मैले केहि डलर कमाएँ। जुनमा, मैले अनुमानित राजस्वसँग मिलाएँ जुन Adsense ले आपूर्ति गरिरहेको थियो - तर मसँग छैन गुगल ऐडसेन्स अनुकूलित। तर जुलाईमा, म एड्सेन्सको तुलनामा टेक्स्ट लिंक विज्ञापनको साथ दुई गुणा बढी ल्याउनको लागि खडा छु। वाह।
कुञ्जी पाठ लिंक विज्ञापन सफलता यो हो कि यो ब्लगको लागि निर्माण गरिएको हो, वेब साइटको लागि होइन। तिनीहरू WordPress लाई प्रयोगकर्ताहरूलाई सजिलो बनाउनको लागि प्लगइन पनि आपूर्ति गर्दछन्। विज्ञापनदाताहरूले शब्दहरू भन्दा 'पोष्टहरू' किन्न सक्छन्। यो एक अविश्वसनीय सुविधा हो, दुबै ब्ल्गर र विज्ञापनकर्ताको लागि। यदि तपाईं दिइएको शीर्षकमा पोष्ट लेख्नुहुन्छ भने, यो कत्ति अचम्मको कुरा होइन कि तपाईंले शीर्षक खरीद गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई थाहा छ तपाईंको उत्पादनलाई समर्थन गर्दछ? धेरै अचम्मको अवसर।
WordPress: प्रत्येक पोष्टमा गतिशील मेटा विवरण
WordPress: मेटा ट्याग निर्माणको लागि दुई SEO प्लगइनहरू